ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - ဗာဂျီးနီးယား၊ Falls Church ရှိပုဂ္ဂလိကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးခန်း
FCHC ကိုတည်ထောင်သူနှင့်ဒါရိုက်တာ Rosemary Codding မှကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာ၏သမိုင်းကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင်များကိုလေ့လာပါ။
ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာ Falls - ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်
Church Healthcare Center - ရေတံခွန်
ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာရေတံခွန် - စေတနာ့ဝန်ထမ်း
FCHC သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှို့ဝှက်ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာမှု၌တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ taking မှပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာ၊ သင်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ လုံခြုံမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးမှလူနာအခွင့်အရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းမှလေ့ကျင့် ACOG, အမျိုးသားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ကျန်းမာရေးဗာဂျီးနီးယားကျန်းမာရေးဌာနတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှုတွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောလုံခြုံမှုမှတ်တမ်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှုအားလုံး၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ကျား၊ မရေးရာဖော်ပြချက်များအားလုံးကိုလူနာများအားကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နားလည်မှု၊ အထောက်အပံ့နှင့်အရည်အသွေးရှိသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးသည်။ FCHC သည်ရပ်ရွာအခြေပြုမီးယပ်အထူးကုဌာနဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကျွေးမွေးသောနှစ်ပေါင်း ၅၀ မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများအကျိုးခံစားစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လျှို့ဝှက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးသည် ပုဂ္ဂလိကလစာလူနာများအတွက်တတ်နိုင်သောအဖိုးအခများနှင့်အာမခံအများစုကိုကြိုဆိုသည်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များကိုအချို့နည်းတူစီစဉ်နိုင်သည် ရန်ပုံငွေအကူအညီ မျှော်လင့်မထားသောသားဖွားမီးယပ်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းအတွက်
ကြင်နာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နားလည်မှုနှင့်လေးစားမှုတို့သည်အုတ်မြစ်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာ ၀ န်ထမ်းများ၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဌာနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာအားလုံးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွှတ်မှုများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုဖော်ပြသောလိင်တူချစ်သူလူနာများအားလိင်တူချစ်ခြင်း၊
FCHC သည်နားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ အထောက်အပံ့ပေးရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရမီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်များ၊ သူနာပြုများ၊ လူနာပညာပေးသူများ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆရာများသည်ဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပါ ၀ င်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတိုင်း၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားပိုင်ခွင့်နှင့်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဖြစ်နိုင်သောရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ဆေးဝါးများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်လည်းပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများမင်းရဲ့အနာဂတ်၊ မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊ နှလုံးသားနဲ့မိသားစုကိုအကောင်းဆုံးပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတာမင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာတစ် ဦး ချင်းစီအားပညာပေးရန်ကြိုးစားသည်သူတို့၏မိသားစုများအားကျန်းမာရေး၏အခြေခံမူများကိုသင်ကြားပေးရန်။
သင်၏လူနာ၏ပညာရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ရှောက်မှုများကိုသင်၏လူတစ် ဦး ချင်း၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေစွာပြုလုပ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Falls Church Healthcare သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မယိမ်းယိုင်သောရွေးချယ်မှုကိုထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိမျိုးဆက်ပွားအခွင့်အရေးများအပေါ်နိုင်ငံရေးအရတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အသည်းအသန်တက်ကြွစွာဆန့်ကျင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ပါ။
FCHC သည်အမျိုးသမီးများဘဝများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်မတ်လတွင်ပူးတွဲစပွန်ဆာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာသာယူပါ"။
ယခင်လူနာများ၊ ဆေးသမားများနှင့်လူမှုရေးအေဂျင်စီများသည်အသစ်စက်စက်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစင်တာကိုအမျိုးသမီးများအားဆက်လက်ရည်ညွှန်းသည်။ ရပ်ရွာလူထုသည်အရည်အသွေးကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုနေကြောင်းနှင့်စင်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့် ၀ န်ထမ်းများမှပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုကိုလိုလားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။
Falls Church Healthcare Centre သည်အသင်း ၀ င်ဖြစ်ရခြင်းကိုဂုဏ်ယူသည် အမျိုးသားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဖွဲ့ချုပ်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုကွန်ယက်, ရွေးချယ်မှုစုပေါင်းများအတွက် DC Doulas, မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက်ဆရာဝန်များ, မျိုးဆက်ပွားအခွင့်အရေးများအတွက်စင်တာ, ရွေးချယ်မှုများအတွက်ကက်သလစ် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပညာရှင်များအသင်း (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်မပိတ်ခင်) ။ ကျနော်တို့ကိုထောက်ခံသူတွေပါ NARAL ဗာဂျီးနီးယား, ဝါရှင်တန်Areaရိယာဆေးခန်းကာကွယ်ရေး Task Force, အ မျိုးဆက်ပွားရွေးချယ်မှုအတွက်ဘာသာရေးညွန့်ပေါင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကျယ်လောင်စွာ.
FCHC တွင်စာရင်းသွင်းထားသည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးခန်းအွန်လိုင်း, Abortion.com, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသူ နှင့် ineedana.com.
ရေတံခွန်ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုသည်ဗာဂျီးနီးယားတွင်ပထမဆုံးနှင့် DC Metropolitan inရိယာတွင် ၂ ခုအနက်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ရွေးချယ်မှုလိုလားသော doula ဝန်ဆောင်မှုများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာရန်။ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
မကြောက်ပါနဲ့ #RealClinics ဒီမှာရှိတယ်။ ဆေးခန်းအတုများကိုပံ့ပိုးသောဥပဒေပြုရေးကန ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုရှာဖွေသောသူများအားကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖျက်ချမှုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဖြစ်ကြောင်းသေချာစေလိုပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများအားလုံး၊ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးပြီးသင့်အားအကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်.